Ogaden News Agency (ONA) – Shacabka Ree Kashmiir oo Kacdoon Hindiya Ka Dhan Ah Bilaabay.
Shacabka Ree Kashmiir oo Kacdoon Hindiya Ka Dhan Ah Bilaabay.
Kocdoon looga soo horjeeda maamulka Hindiya ee kashmiir ayaa sii xoogaystay kadib markii mid ka mid ah laba dibedbaxayaal ah oo gaari jiiray uu dhintay.
Booliska ayaa oodda kaga qaaday sunta dadka ka ilmeysiisa boqolaal dibedbaxayaal ah kuwaasi oo ka qeyb galayay aaska Kaiser Bhat oo uu caasimadda Srinagar gaari ku jiiray. Maamulka ayaa Bandow ku soo ragay qeybo ka mid ah caasimadda, sidoo kalana waxaa la xidhay adeegga Internetka. Kashmiir ayaa ah goob ay isku haystaan Hindiya iyo Pakistan.
Kacdoonkan ayaa bilowday kadib markii boolis aad u hubeysan ay galeen Misaajid ku yaalla caasimadda oo ay ku sheegeen in uu xarun u yahay maleeshiyada. Saraakiisha amniga ayaa sheegay in booliska ay isdifaacayeen balse qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in si kas ah ay gaariga ugu soo wadeen goob uu dadka buuxay.
Muuqaallo argagax leh oo muujinya gaadhiga baarlamaanka oo wajiga wiilka yar jiiraya ayaa lagu dhex wareejinayay baraha bulshada. Xarumaha ganacsiga ayaa la xidhay waxaana waddooyinka ka muuqanayay booliska. Dhacdadaan ayaa ku soo beegmeysa iyadoo maalamaha soo socda la filayay in wasiirka arrimah gudaha Hindiya Rajnath Singh uu booqasho ku tago gobolka.
Muslimiinta doonaya gooni u goosadka ayaa waxaa hadheeyay olole rabshado wata oo looga soo horjeeda maamulka Hindiya tan iyo dhamaadkii 80-tameeyadii. Tobanaan kun oo qof ayaa lagu dilay dagaalka Kashmiir kaas oo Hindiya iyo Pakistan-ba ay sheeganayaan in Kashmiir ay iyagu leeyihiin.